Enwere m ike Naghachi faịlụ site exFAT Drive?
M formatted m 16GB USB flash mbanye na exFAT usoro mmadụ na mberede. O di nwute na m echekwara ụfọdụ m azụmahịa akwụkwọ na ya na ndabere. M mkpa iji nweta ha azụ na exFAT mbanye dị ka ngwa ngwa dị ka m nwere ike. Ị nwere ihe ọ bụla aro? Ezi echiche.
N'ihi na nke usoro kwesịrị ekwesị n'ihi na ma Windows na Mac kọmputa na nnukwu faịlụ nkwado atụmatụ, exFAT usoro e ọtụtụ-eji nnukwu nchekwa media dị ka USB flash mbanye na mpụga ike mbanye. exFAT mbanye dị mfe iji chekwaa faịlụ na a size nke ihe karịrị 4GB. Otú ọ dị, data na gị exFAT mbanye ka nwere ike ga-efu n'ihi nhichapụ, mbanye formatting, usoro njehie, virus agha ma ọ bụ ụgbọala ire ure. Agbanyeghị, dị ka ogologo oge furu efu data na gị exFAT mbanye na-adịghị overwritten site ọhụrụ data, na ị na-yiri ka weghachite ha na enyemaka nke ihe exFAT mbanye data mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ data site na exFAT mbanye / nkebi. The ike mgbake atụmatụ nke a usoro-enyere gị aka niile faịlụ na ụdị si gị exFAT mbanye, gụnyere videos, ọdịyo faịlụ, foto, wdg
Ị nwere ike nweta ikpe version nke usoro ihe omume iji weghachi exFAT mbanye data ugbu a!
Naghachi Data si exFAT mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, m ga-ịrụ exFAT mbanye data mgbake site na iji Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac version nwere yiri ime kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi data si exFAT mbanye
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery omume na kọmputa gị, ị ga-enweta ihe interface dị ka ndị na, na nke 3 mgbake ụdịdị-egosipụta.
Naghachi ehichapụ, formatted, furu efu ma ọ emerụ faịlụ site na gị exFAT mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị exFAT mbanye
Ebe a gị na mkpa iji họrọ gị exFAT mbanye ke window na pịa "Malite" button na-amalite ịchọputa faịlụ na ya.
Biko họrọ "exFAT" usoro ke "Previous File System" ke window.
Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake data si a nchekwa media na exFAT usoro, ị mkpa ijide n'aka na ọ ga-ọma-ghọtara site tour kọmputa.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na exFAT mbanye
Hụrụ faịlụ gị exFAT mbanye ga-edepụtara ke "File Pịnye" ma ọ bụ "Ụzọ" Atiya mgbe scanning. Ị nwere ike ele faịlụ aha elele ma gị furu efu data nwere ike agbapụtawo ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara faịlụ ị na-aga naputa site na gị exFAT mbanye na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị si nkebi.
Olee otú Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ 3GP Videos
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si exFAT Drive